Inona ireo mpizara vy tsy mitanjaka? Karazana sy fampiasa. | Famoronana an-tserasera
pochoky | | Famolavolana tranonkala
Azo antoka fa efa naheno momba ny tetikasa Eoropeana GAIA-X ianao. Ary, amin'ity tontolo feno fankahalana ity, izay itehirizana ny angon-drakitrao ary ilaina ny fanajana ny lalàna fiarovana ny angona eropeana.
Ary koa, ilay antsointsika hoe rahona dia tsy zavatra tsy azo zahana, zavatra ara-batana izy io, ary hita ao amin'ireo ivon-tahiry lehibe. Noho izany, raha iray amin'ireo ianao izy ireo dia miahy ny amin'ny olan'ny tsiambaratelo sy ny toerana ipetrahan'ny datao rehetra manokana na orinasa, tokony hanara-maso tsara kokoa ny mpanome tolotra nofidinao ...
1 Inona no atao hoe mpizara vy tsy mitanjaka?
3 Fomba sy fampiasa
Inona no atao hoe mpizara vy tsy mitanjaka?
ny mpizara vy tsy mitanjakana mpizara voatokanaIzy io dia karazana serivisy manome anao fitaovana mafy orina, fa tsy mampiasa mpizara nozaraina ho an'ny mpanjifa maromaro ary ampiasain'ny VPS (Virtual Private Server). Noho izany, manana tombony vitsivitsy izy, toy ny:
Cheaper amin'ny avo-end (avo-end) raha oharina amin'ny VPS, mitahiry vola.
Fampisehoana tsy fananana sosona hypervisor na fananana loharanom-pitaovana nozaraina, ho an'ireo izay mitady plus.
Fantsom-pifandraisana avo lenta kokoa, noho izany dia tsara ho an'ireo mpanjifa mila fifamoivoizana bebe kokoa.
Avy amin'ireo teboka roa teo aloha dia hanana TTFB haingana kokoa ianao (Time to First Byte).
Fandefasana sy fahaleovan-tena tsara kokoa, fanaraha-maso feno.
Fanamafisana sy fitoniana lehibe kokoa rehefa voatokana. Izany hoe, miasa toy ny hoe manana foibe angon-drakitrao manokana ianao, saingy tsy misy ny fandaniana be mividy ny fitaovana sy ny fitazonana azy io.
Mety hananana tahiry mora foana amin'ny alàlan'ny fanitarana ny serivisinao.
Noho izany, ny mpizara voatokana dia mety indrindra ho an'ireo izay mila fampiantranoana na karazana serivisy rahona ary mikasa ny hanana fidirana maro be. Izany hoe ireo izay tsy ampy ny VPS, toy ny tranokalan'ny orinasa lehibe, e-varotra, bilaogy misy fitsidihana maro, sns.
To be able mifidy mpizara voatokana mety, tokony hotadidinao foana ny hevi-dehibe sasany:
Unité centrale- Ireo mpizara ireo dia manana processeur maromaro. Izy ireo no hiandraikitra ny fikirakirana ny angon-drakitra, noho izany, ianao dia tokony hisafidy milina manana fahombiazana mifanaraka amin'ny tanjonao.
ram: Zava-dehibe ny fanananao fahatsiarovan-tena lehibe, satria ny hakingan'ny rafitra dia miankina aminy ihany koa. Ary koa, tokony hanana latency ambany indrindra azo atao.
fitehirizana: Azonao atao ny mahita vahaolana amin'ny kapila mavitrika (HDD), na vahaolana haingana kokoa amin'ny kapila mafy (SSD). Ho fanampin'ny karazana teknolojia, zava-dehibe koa ny fisafidianana ny fahaiza-manao mety amin'ny tanjonao. Mazava ho azy, amin'ireto karazana vahaolana ireto dia tsy mila miahiahy momba ny angon-drakitrao koa ianao, satria matetika izy ireo dia manana rafitra miverimberina (RAID), ka na tsy mahomby aza ny kapila dia azo soloina tsy misy fiatraikany amin'ny datao.
Rafitra fandidiana: Hevi-dehibe iray hafa io, ary na dia vahaolana maro aza no misafidy ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux, izay manome fiarovana, fahamendrehana ary fitoniana lehibe. Ny sasany koa manana safidy hampiasa Windows Server, raha sanatria ka mila an'io rafitra manokana io ianao noho ny antony sasany.
Ancho de banda: lafin-javatra iray hafa tena lehibe, satria ny fetran'ny famindrana data dia miankina aminy. Tokony hisafidy ny vahaolana mifanaraka indrindra amin'ny volabe antenainao hafindra ianao.
GDPR- Araka ny efa nolazaiko tany am-piandohana, ny fisafidianana mpizara natokana dia safidy tsara matetika hahazoana antoka fa manaja ny lalàna fiarovana ny angon-drakitra Eoropeana.
ny hafa: mety liana koa amin'ny famakafakana ny karazana tontonana fanaraha-maso atolotra anao, serivisy fanampiny natolotry ny mpamatsy, sns.
Fomba sy fampiasa
Raha mbola tsy dia mazava tsara aminao ny fampiasana azo omena an'ny mpizara voatokana toa ny OVHcloud dia tokony ho fantatrao ireo serivisy sy fampiharana azo atao:
Mitsangàna: Io no serivisy mora vidy indrindra, ho an'ny filan'ny fampiantranoana na fampiantranoana tranonkala, fandefasana, mpizara rakitra na fampiharana ara-barotra. Miaraka amin'ny bandwidth avo, capacities avo lenta ary processeur Intel Xeon.
Advance: ny serivisy natao manokana ho an'ireo orinasa kely mila mampiasa vola amin'ny mpizara multigpose, miaraka amin'ny fampisehoana avo, RAM betsaka, ary bandwidth tsy voafetra. Ohatra, ho an'ireo izay te hampiantrano tranokala orinasa, fivarotana e-varotra, fampiharana fandraharahana (ERP sy CRM), virtualisation, sns.
Storage: mpizara voatokana hitahiry izay rehetra ilainao, manaova kopia voafafa, na fampiantranoana nozaraina. Miaraka amin'ny fahaiza-manao lehibe (hatramin'ny 504TB), ny fahafaha-misafidy eo amin'ny NVMe SSDs, ny fahazoana avo hanana ny data-nao, sy ny interoperability avo lenta.
Game: Amin'ity karazana serivera voatokana ity avy amin'ny OVHcloud dia azonao atao ny manana mpizara lalao video anao manokana, voaro amin'ny fanafihana DDoS ary miaraka amin'ireo mpikirakira AMD Zen 2. Ohatra, azonao atao ny mampiditra mpizara ho an'ny Minecraft, na ho mpampiantrano amin'ny sehatra streaming.
foto-drafitr'asa: karazana serivera voatokana miaraka amina processeur matanjaka hananganana fotodrafitrasao manokana ho an'ireo orinasan-teknolojia, ivon-toeram-pikarohana na oniversite misy ny fahaizan'ny computing, ny fitahirizana ary ny fahombiazan'ny tambajotra.
Haavo avo- Ny fikirakirana matanjaka indrindra amin'ny serivisy rehetra, natao manokana ho an'ireo orinasa mila fampiasana mahery na tontolo iainana mitsikera. Ohatra, ny fangatahana mitaky loharano toy ny Big Data, Machine Learning, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Inona ireo mpizara vy tsy mitanjaka?